Top 5 iPad si Mac Transfer Tools (Mavericks taageerayaan)
> Resource > Mac > Top 5 iPod si Mac Transfer Tools
Haddii aad tahay user Mac ah, mar dambe ma ay baadhaan si aad u hesho software oo awood aad si ay u gudbiyaan files ka iPod in aad Mac. Ha illoobin ku saabsan su'aalo oo ka shaqeeya oo oo aan dib u eegi doona, maxaa yeelay, qodobkan ku saabsan oo qalab ayaa la xaqiijiyay in ay wax ku ool ah si ay iPod wareejiyo Mac. Waxaa jira Naaarta saciiro u ah qalab loogu talagalay in ay kala iibsiga iPod Mac. 5 sare oo iyaga ka mid yihiin:
# 1. Wondershare TunesGo (Mac)
# 2. 4Media iPod si Mac kala iibsiga
# 3. Senuti
# 4. iRip
# 5. iExplorer
Wondershare TunesGo (Mac) waa wakiilka aad u caqli badan inay u dhoofiyaan music ka iPod si Mac. Waxay u badan tahay waa Lugood Saaxiibkiis ugu fiican ilaa iyo haatan. Iyada oo talaabooyin fudud, in aad aad Lugood Library wareejin karaan music iyo playlists ka iPod si toos ah Mac, nuqul ka xushay songs, videos, sawiro si aad Mac.
Tababaraha Tani xirfad sii dayn doonaa inaad wax badan ka badan kartaa Lugood samayn. Tusaale ahaan, koobiga iPod playlist iyo taageero cadaymaha cod aad inaan la samayn karaa Lugood. Laakiin iyadoo Wondershare, aadan wax laga walwalo maaraynta files kuwa.
Download Wondershare TunesGo (Mac) in ay isku day ah hadda!
Copy music dib ugu Lugood leh faahfaahinta: qashanka, comments, ratings, iwm
Beddelaan heeso iyo videos in ay la jaan qaada iDevice
Taageer oo dhan Lahjadaha ee macruufka 9/8/7 alaabta, nano iPod, iwm
Bedelka music iyo playlists ka nano iPod / shaandheeyn / classic in Lugood / Mac.
Lugood ku tiirsan;
# 2. 4Media iPod inay kala iibsiga Mac
4Media iPod inay kala iibsiga Mac kaa caawinaysaa in aad si samayn nuqul file ka iPod si Mac. Waxay bixisaa hab habboon in gurmad aad database sababta oo ah waxay leeyihiin software kala iibsiga kaamil ah taas oo ka caawisa si loo xaliyo files inta qiilqiil ama shilalka. Maamul files ka mid ah aaladaha badan waqti isku mid ah waa mid aad u fudud.
Hanaanka wareejinta fudud oo degdeg badan
Speed ​​hoos marka wareejinta faylasha weyn
Muuqaalka cad oo qalab awood badan. Taasi waa sida aad ku tilmaami Senuti . Software ayaa soo baxday in la Lugood gadaal loo higgaadiyo. Hanaanka wareejinta ayaa la isticmaalayo software Senuti waxaa loo tixgeliyaa sida deg deg ah oo faahfaahsan. Metadata, podcasts, music, videos iyo noocyo badan oo file kale waxa uu noqon karaa 'dhaqaaqo in' iyo 'guurto' si fudud.
Wareejinta xogta Fast
Ma aan si cad loo soo bandhigo heeso
La'aanta interface bannaanka fursadaha
iRip waxaa loo tixgeliyaa sida software weyn marka la eego oo bilaash ah iPod inay kala iibsiga Mac. Waxay leedahay feature aad u fiican oo ay u badan tahay ma barnaamijyadooda kale u samayn karaa. App Tani waa qalab wax ku ool ah u tagi lahayd Mac.
wareejiyo files iBook
qaab xawaaraha sare
ratings yihiin mararka qaarkood awoodin in ay lagu wareejiyo
Tani waa dhameystiran dhibaatadaada solver u iPod inay kala iibsiga Mac. Si fudud soo degsado ka iExplorer oo xidhmi doontaa Mac iyo qalab. Dashboard A nidaamsan tusi doonaa in aad shaashadda. / P>
version -free uu leeyahay muuqaalada xadidan
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPod si Mac
Sida loo soo dejinta Sony (DCR iyo Human Development Report) Video inay Mac OS X (Yosemite ka mid ah)